Phupha Ngesoyikiso Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ngaphantsi komthetho, nabani na ogrogrisa omnye umntu ukuba enze ulwaphulo-mthetho kuye ulwaphulo-mthetho. Nangona kunjalo, le yinkcazo yeklasikhi yegama elithi "isoyikiso", kuba umntu ngamnye uziva ngokwahlukileyo kakhulu koko kuboyikisayo.
Ewe kunjalo, kukho iimeko eziqhelekileyo ezisongela wonke umntu. Nokuba ngumphangi webhanki ophethe umpu phambi kweempumlo zethu, umntu oza kukushiya engakushiyi wedwa, umpu oneembumbulu, ihlokondiba elisongelayo kumdlalo bhanyabhanya, okanye idrone yeenqwelomoya kwimimandla yemfazwe, konke oku kuyothusa Ngaphandle kwamathandabuzo zisisisongelo kubomi bethu.
Kodwa nkqu neemeko zemihla ngemihla zinokubonakala ngathi zisoyikisa- umgqumo wommelwane ongenalo uvelwano ngapha kocingo lwasegadini ungoyikisa kakhulu. Ukuba woyika ukuphulukana nomsebenzi ngenxa yokuba ucinga ukuba awuzokuhlangabezana neemfuno zomqeshi, oku kukwayisoyikiso. Omnye woyika ubukho bayo. Kodwa sinokuhlangabezana nesoyikiso sobubi kwiimovie, umzekelo kuthotho lweHarry Potter, kwiimuvi Uloyiko okanye kwimiboniso bhanyabhanya yesayensi efana ne "Jurassic Park", apho iidinosaurs zitya abantu.
Ephupheni, uphawu lwephupha "isoyikiso" lunokubonakala ngeendlela ezahlukeneyo kwaye ukutolikwa kwephupha kukwahlukile. Ngoku funda konke malunga nohlalutyo oluqhelekileyo lwamaphupha malunga nemeko enobungozi, kunye neenkcazo ngokubanzi.
1 Uphawu lwephupha «isoyikiso» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukusongela ngesixhobo: Nantsi ingozi yokufa ephupheni!
2 Uphawu lwephupha «isoyikiso» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «isoyikiso» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «isoyikiso» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isoyikiso» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukusongela ngesixhobo: Nantsi ingozi yokufa ephupheni!
Ukuba umntu woyikiswa ngesixhobo ephupheni, ngamanye amaxesha oko kubonisa ukwesaba kwakhe, okunokuthi kubuyiselwe ekuziphatheni ngokuzingca kwabanye kwimeko yokuvuka. Kuyabonakala ukuba, umntu oleleyo akaqinisekanga ukuba ungaboyisa njani abantu abanjalo kubomi bemihla ngemihla.
Ukuba umpu othile unompu, umpu okanye umpu ongaphantsi unendima ebalulekileyo ephupheni, ubonakalisa ubuqili obunamandla, woyikisa umntu oleleyo. Umpu omdala, osongelwayo, ngokukodwa ubonakalisa utyekelo lokulawula umsindo. Isixhobo esibukhali njengemela okanye i-saber zihlala zifanekisela iintshaba kunye nabantu abanomona abangakulungelanga ukuphupha.
Uphawu lwephupha «isoyikiso» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwingcaciso ngokubanzi yephupha, kubalulekile ukuba utolike ngokuchanekileyo iphupha elo ukuba ukhumbule yonke imixholo yephupha elo. Ukuba ufumana isoyikiso kwi el mundo yamaphupha, ngokophando lwamaphupha, oku kungabonisa ingozi okanye a imbambanoezinokuthi zihambelane nenqanaba lokugweba. Apha umphuphi kufuneka athathele ingqalelo into yokuba kufuneka oyike ikamva lakhe elikhuselekileyo.
Kwelinye icala, ukuba ngumntu osongela omnye umntu ephupheni, iphupha elo lenza iintlungu ezininzi kwabanye kwihlabathi elivukayo ngokuziphatha kwabo. Nangona kunjalo, ixhoba lizisola ngesi senzo kwaye lizama ukulungisa umonakalo.
Isongelo sinokuvela xa uphupha njengento engaphathekiyo. Imeko okanye umntu odala imvakalelo yokoyikiswa, nangona kunjalo akukho ngozi ibonakala ibonakala. Imixholo yamaphupha enjalo ingabizwa isilumkiso uqondwe, cinga ngononophelo ngezicwangciso zakho kwaye, ngaphezulu kwako konke, ungakwenzi ngokungxama.
Uphawu lwephupha «isoyikiso» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, umfanekiso wephupha "usongelo" ufuzisela eyakho ungquzulwano lwangaphakathi. Amava obomi bokwenyani angadityaniswa nala mava ephupha. Ukuphupha ngokunokwenzeka kukwenza ube netyala ngenxa yokuba wenze ngokungxama nangokungakhathali ekuvukeni ubomi, kwaye ngoku ephupheni ujongana neziphumo ezinokubangelwa kuko.
Ukuba umntu uziva esisongelo ephupheni, oku kungabonisa ukungazithembi okucinezela iphupha kubomi babo bokwenyani. Uloyiko kunye namaxhala ngekamva banokuziva besoyikisa njengoyikiso lomzimba. Ukuba woyikiswa ngeharpoon ngelixa ulele, amaxesha amabi anokuvela. Imela emqaleni ibonisa njengephupha ekufuneka ulilumkele nabanye abantu: Ayinguye wonke umntu oneenjongo ezintle nawe!
Umntu ochaphazelekayo kufuneka ajonge kwakhona kumnyhadala wephupha kwakhona, kuba imeko nganye yephupha kufuneka itolikwe ngokwahlukeneyo. Ukutolikwa kwephupha kunokuba sisikhokelo esihle kuye apho kufanelekileyo ukuba atolike isiganeko sephupha lakhe.
Uphawu lwephupha «isoyikiso» - ukutolika kokomoya
Ukuba ujonga uphawu lwephupha "isoyikiso" ngokwembono yokomoya yokuchazwa kwephupha, nalu uloyiko olusisiseko kunye nokungazithembi.
Ukuphupha iicaresses duda ekukhuleni kwakho ngokomoya kwaye kufuneka uzibuze ngokucacileyo ukuba awuthinteli ukufikelela kwinqanaba lokomoya ngenxa yokungazithembi.